Isiteshi saseGauteng sihlabane ngoqweqwe lomsakazi waseThekwini
USIZWE Dhlomo ovale isikhala esishiywe nguNdumiso Ngcobo noKgomotso Matsunyane kwiKaya FM Isithombe:TWITTER
ISITESHI esesihlabane kwaze kwakabili ngendondo yeBest Station of the Year kuma-SA Radio Awards ngo2019/2020, iKaya 95.9 FM, ihlabane ngoqweqwe lo msakazi waseThekwini, uSizwe Dhlomo.
Lezi zindaba zimenyezelwe yiziphathimandla zalo msakazo, oteketiswa ngele-Home of The Afropolitan, ngesitatimende ezisithumelele abezindaba futhi zabuye zasifaka nasezinkundleni zokuxhumana izolo. USizwe, osenamava eminyaka engu-15 eyibambile insimbi ishisa kule ndima, uzovala isikhala esivuleke ngokuhamba kukaNdumiso Ngcobo noKgomotso Matsunyane ohlelweni lwantambama i-Uncaptured.
Ngokwesitatimende, uSizwe , osebuya kwiNewzroom Afrika ne-702, uzoqala ukuzwakala kulesi siteshi ngemiSombuluko kuze kube nguLwesine ngoJulayi 7.
OKgomotso noNdumiso bagcine ukusakaza uhlelo lwabo lwantambama ngesonto eledlule.
OnguMqondisi-Jikelele walo msakazo, uGreg Maloka, uthe okubajabulisa kakhulu ngokusebenza noSizwe ukuthi lo msakazo uzokwazi ukuhlomisa abalaleli bawo ngolwazi njengoba uSizwe engungoti kwingxubevange yemikhakha okubalwa kuyo izindaba zomnotho, ezemfashini nezindaba ezisematheni.
"Indlela anothando ngayo ngezinhlobo zomculo wase-Afrika jikelele sisazokuzwa," kuphawula uMaloka.
Eziphawulela uSizwe, ucashunwe ethi kuyisibusiso esikhulu kuye ukusebenza ngaphansi kukaqolothakamango uGreg. "Sengikujahe kabi ukuxhumana nabalaleli beKaya, njengoba siwelisa umsakazo nezwe ekusaseni," kuphetha uSizwe owaqala ukuveza ikhono lakhe kwezokusakaza esiteshini sethelevishini, iMTV. Insizwa enamava ezinhlelweni zeTV nezasemsakazweni.
Lo msakazo ozinze eGauteng ulalelwa kakhulu ngabantu abamnyama basezindaweni ezakhele amadolobha abaneminyaka ephakathi kuka25 no49. IKaya igxile kakhulu emculweni nasezingxoxweni.